Hatattamaan Waan Godhamuu Qabuu – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHatattamaan Waan Godhamuu Qabuu
TPLF enforces genocide in Oromia, the same way the Tigray people suffered during the Derg regime.
Dirmaan OPDO fi TPLF baatii muraasaa akka dinqitti of mul’isaa ture doksaan dhukana keessatti raawwate. “Hima dideen du’a hin didu “, akkuma jedhan warri dirmaa kana hubachuu dandeenyu amma nuuf danda’ametti uummata keenyaaf ibsuu yaalleera. An maqaa Damee Boruu jedhuun baatii Gurandalaa, 2017 ”Meeshaan Abbaa Hojjetataaf Dhimma baasa”mata duree jedhu jalatti waa’ee OPDO barreesseen jira. Maxxansaan kunis Ayyaantuu fi Sagalee Qeerroo Bilisummaa irratti bahee jira.
OPDOn uumamuu irraa kaaste amma har’a meeshaa TPLF. Kan ijaaramtes tahe kan jiraatuuf TPLF tajaajiluuf. Akka ijaarsatti xanacha( cancer) uummatn Oromoo of keessa qabu akka taate dagachuu hin qabnu. Ijaarsaa fi nama ijaarsa keessa jiru adda baafne ilaaluu qabna. Ijaarsi kaayyoo ijaaramuu fi akeeka bakkaan gahu qaba. Namootni ijaarsa keessatti qooda fudhatan ilaalcha mataa isaanii fi kaayyoo ittiin bulan qabaachuu danda’u. Warri ijaarsa keessa galanii faallaa ijaarsichaa hojjetan akkuma jiran kan ijaarasha itti bulu immoo amma du’aatti wajjin deema.
Afaan Oromoo kan dubbatanii fi namoota dhalootan Ormoo tahan waan keessa jiraniif malee OPDOn ijaarsa Oromoo miti. Akkeeni ijaaramteef uummata Oromoo humnaan ykn sobaan bokoksitee qabuudhaan akka TPLF jalatti jilbeefatee bulu gochu dha. Tooftaan OPDO fi warra akka ishee saboota adda addaa keessatti ijaaramanii, TPLF akka bara dheeraa jiraatu gargaaree jira. Gara fuula duraas ni gargaara.Sareen waanuma gooftaa ishee irraa hafe nyaachuudhaan amaanamaa taatee gooftaa isheef duuti. Irbaata mataa ishee illee hin qabdu.Yaroo beeloftu raqa barbaadee ykn udaan gooftaa ishee nyaatee jiraatti. OPDOn saree TPLF uummata Oromoo ittiin burjaajessuu fi doorsisuuf ijaarrate.
Qabeenya uummata Oromoo kan itt bashannee jiraatu TPLF. Waanuma TPLF irraa harca’ee hafe argatuun gammaddee uummata ishee haaduuf dabarsitee kennuun hojii saree irra adda ishee hin godhu. OPDO keessa akka namaatti warra uummata isaaniif yaadanii fi gubatan akka jiran mamii hin qabu. OPDO keessa warra saba boontota tahan TPLF funaantee akka ajjeessaa turtee fi har’as akka ajjeessaa jirtu namni quba hin qabne jira natti fakkaatu.
Garuu warra akka Abaa Duulaa Gamadaa maqaa sobaa kana of irra tolee uummata Oromoo gaaga’ama guddaa amma kana jedhamee himamuu hin dandeenye teenyee ilaaluun baayyee nama gadisiisa. Abbaan Dulaa “uummatni koo waan kabajaa dhabeef”, taaitaa koo gadiseera yaroo jedhu dabbaleewwan isa keessattuu warra biyya ala keessatt maqaa activistota Oromoon iyyaa jiran hedduu farsan. Qabsoo bilisummaa Oromoo kan bakka gahuuf deemuu OPDOn akka tahee nu fudhachiisuuf hedduu wacabaran. Abban Duulaa waan TPLF Obbo Lammaa Magrsaafaa shakkitee akka tuhatuuf tooftaan taa’itaa koo gadhiise jedhee gara OPDO akka deebi’u godhamuu isa waan amma tahaa jiru irraa hubachuun rakkisaa miti. Uummatni isaa salphatee sun wal gahii EPDRF booda waan darbeef hin jiru. Yoo dhugaa uummata isa dbaabbatee jirate maaliif aangoo isaatti deebi’uu qaba? Haala kana irra kan agarru gareen Obbo Lamaa injifatmee waan harka laatee fakkaata. Kanaafuu Abbaan Duulaa ergama isaa bakkaan gahee gara taa’itaa isaati deebi’uu qaba.
Yaroo Fincilli Xumura Garbummaa jabaatu Obbo Lamma Magarsaa waan barbaade godhee akka uummata Oromoo tasgabeessuuf TPLF biraa eeyyama qaba. Haa tahu malee erga gara uummata Oromoo dhufee qabsoo uummata Oromooti makamee kaasee dararmuun uummtaa isaa waan isa gadisiiseef eehama TPLF darbee waan uummata isaa wajjin dhaabachuu filate fakkaata. Kanaafuu Abbaan Duula akka garee Obbo Lamaa tiksuuf ergamuun barbaachisaa tahee argame.
Gocha Obbo Lamma keessaa qabsoo uummata Oromoo kan bu’aa guddaa yaroo gabaaba kanatti inni raawwate kaasuun fedha. Prezedantii Orommo tahee “ uummta miliooyona shanta utuu of duubaa qabnu maal sodana “ jechuun isa dhugaa jiruu qabsowwan Oromoo hunduu akka fakkeenyatti kan fudhachuu qabnu dha. Aangoo sana qabaatee humna uummata keenya saba isaaf labsuun gahaa guddaa dha. Baayyeen keenya humna uummata keenya kana waan hin hubatneef sodaanee baayyee rom’iina. Inni lammaffaa poolisii Oromiyaa akka uummata isaanii wajiin dhaabbatan qajeelchama kenuun yaroo gabaabduuf illee taatu uummata isaa wajjin hariiroo galuu agarssisa. Inni sadaffaa yaroo TPLF uummata naannoo Oromiyaa jiran hunda ijaartee, hidhachiiftee uummata keenya irratti bobaaftu uummata Amaaraa wajjin nagaa uummun isaa beekumsa guddaa dha. Diina uummata Oromoo xiqqeessuuf gaheenya guddaa qaba. Kana malees abbaa irrummaa TPLF cabsuuf yaalli guddaa dha.
Siyaansi akka kowaasii (kuraa) xaphaa waan taheef warri goolii gashuu hin dandeenye xapha kana keessaa galuu hin qaban. Yoo galuu barbaadan garuu shaakalanii, qophaa’anii goolii galshuuf yaroo gahan galuu qabu yaada jedhu qaba. Yaadni isaa kun wal gahii EPRDF kana irratti ammam akka isaaf milka’e hin beeku. Yaaroo waa’ee uummata Oromoo qee’ee isaanii irraa buqaa’anii fi dhumaatiin Calanqoo ka’u Getachoo Assefaa yihuuda lamaan Warqinee Gabayoo fi Dirbaa Kuma jidduu dhaabbatee “ isin beekna isin ABO dha” jedhee itti roorse jedhama. Sana booda bokoksee afuura guutuu qabu sana Getachoo Assafaa kan dhoose fakkata. Kan kana nama jechsiisu wal gahii EPRDF kan Obbo Lammaafaa irraa qodha fudhatanii xumurame irratti waraana raayyaa biyyaa kan uummata keenyaa qee’ee isaa buqqisee fi Calanqoo irratti dhiiga ilaam Oromoo dhangalaaseef galata galchanii bahuu isaanitti. Meerre dhugaan ? Obbo Lamaan affan isaan waraanni raayyaa kun utuu hin gaafatamiin dhufee uummata keenya miidhee jira erga jedhe maaliif galata galshaaf? Karaa isaaf danda’ameen waan tahe uummataa isaaf ifa gochuu dirqamni seenaa namuma isa irra jira. Uummatni milooyoonni shantamni isa duukaa ka’e sun afaan isaa irraa dhaguu barbaada. Kana malees humni inni labse sun utubaa tahee isa duuba akka jiru dagachuu hin qabu.
An karaa koof ijaarsa OPDO irraa akka ijaarsaatti waan haaran dhufa jedhee eegachaa hin turre. Gara fuula duraas hin eegadhu. Warri sorgamuman eegachaa turees haalli kana irra muxxannoo gahaa waan argatan natti fakkaata. Qabsoo xumuraa Garbummaa ilaalchisee amma hatattamaan waan godhamuu:
Artistotni, atleetotni, dargagootni maqaa fooleen tahuu Qeerroon OPDO itti of saaxilaan utuu olee hin buliin dhokachuu qabu, finaanamnii dhumuu dura.
Uummatni Oromoo bakka jiru maratti akka hidhannaa isaa hin hiikane. Kun poolisii Oromiyaa, humna darbata , kan federaalaa fi waraanna rayyaa keesa jiru dabalata.
Karaa dand’ame maraan uummtni keenya meeshaa mana irraa kaase( haaduu, eeboo, mancaa, xiyya fi w.f.) amma meeshaa baraa akka qabaatu irratti hojjechuu.
Caasaan OPDO akka uummta keenya keessa qulqulaa’ee buqqaa’ee badu gochuu. Kana gochuuf immoo kaabinootaa OPDO TPLF wajjin hojjetan haaduu fi shimalan qofa gara jebeenyaan haxxoofnee of keessaa baasuu. Rasaasa warri qabnu Wayaaneef qusachuu.
Sukaaraa fi qabeenya TPLF hataa jirtu harka qulaa qabnee seera itti dhiyeessinu hin jiru. Yoo dandeenye saamuu ykn gubanii biraa fagachuun aarsaa hin barbaachifne irraa nu olcha. Maqaa sukaaraan ijoollee keenya Amboo irratti dhumanii fi waan jiduu kana immoo Shambuu itti tahaa jiru fakkeenya nuuf taha.
Qabsoon Fincila Xumura Garbummaa dachaan jabeessuu qabna. Gabaa lagachuun tooftaa guddaa of harkaa qabnu. Balaa guddaaf uummata keenya hin saaxilu. Baatii tokkoof miti utuu Oromiyaa guutuu keessatti torbaan tokkof gabaan lagatame Finifinneetu bela’u. Finfinnee yoo bela’e qofa kan TPLF irratti ka’u dand’u. Finfinneen utuu hin ka’iin TPLF salphaatti aangoo irraa hin buutu.
Waraana Wayyaane bakka laftuu ishee qofa yaroof dhahaa humna ittiisaa biyyaa guddifachaa deemuu qabna. Karaa cufnee amma waraanni TPLF dhufee nu balleessuu eeguu qabnu. Waan goonu goonee jalaa milquu barbaachisaa dha.
Gargaarsi Qeerroo Bilisummaa fi uummata keenya qee’ee isaanii buqa’anii dararamaa jiran caalatti jabaatee itti fufuu qaba.
Waan Baaneef - Waan Kaaneef Beekna!
Waan Baaneef, Waan Kaaneef Beekna! Qeerroo Bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa, Gurraandhala 13, 2018 (Qeerroo) --…
Waa mul’isuu dhaan malee waan mul’achaa jiru balaaleffachuudhaan jijjiramni hindhufu!!!